2020 NAB Show တွင် NAB Crystal ရေဒီယိုဆုများ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » ၂၀၂၀ NAB ပြပွဲတွင် NAB Crystal Radio ဆုပေးပွဲ
ဖျော်ဖြေရေးဆိုင်ရာအယူအဆသည်ကျယ်ပြန့်သောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများပါ ၀ င်သည့်လူများစွာအားအပန်းဖြေမှုမည်သို့ပေးနိုင်သည်ဟူသောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစိတ်ကူးဖြင့်တန်ဖိုးကိုရရှိနိုင်သည်။ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ရုပ်ရှင်၊ အနုပညာသို့မဟုတ်ရေဒီယိုများမှတဆင့်ဖျော်ဖြေမှုသည်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်လာသည်။ podcast / ရေဒီယိုလုပ်ငန်းတွေမှာဖျော်ဖြေရေးဆိုတာအသိုင်းအဝိုင်းများစွာကိုပေးတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်တယ်။ Podcast တခုဟာအဲဒီ podcast ရဲ့အသံရဲ့နောက်ကွယ်ကဖန်တီးမှုနဲ့မတူပဲ၊ ဟာသကနေအကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကထားနိုင်တယ်၊ နိုင်ငံရေး၊ အနုပညာ၊
Podcast / ရေဒီယိုလုပ်ငန်းသည်လူထုဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်အလုပ်လုပ်သည် အဆိုပါ 2020 NAB ပြပွဲ ရပ်ရွာဝန်ဆောင်မှု၏သီလအလားအလာကိုဂုဏ်ပြုဖို့ပြီးပြည့်စုံသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ The 2020 NAB ပြရန် လာမယ့်, နှင့်မည်သည့်ခမ်းနားအဖြစ်အပျက်ကဲ့သို့ဆုပြပွဲမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းအပေါ်မှန်ဖြစ်ကြသည်။ မှန်တယ်၊ ဒီ,ပြီလ၊ လူငယ်ကဏ္ဍအမျိုးသားအစည်းအရုံး (NAB) သည်အဘို့အ entries တွေကိုလက်ခံသည် NAB Crystal ရေဒီယိုဆုပေးပွဲ။
NAB Crystal ရေဒီယိုဆုပေးပွဲဆိုတာဘာလဲ။
အဆိုပါ NAB Crystal ရေဒီယိုဆု ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများနှင့်၎င်းတို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်မယုံနိုင်လောက်အောင်လူထုဝန်ဆောင်မှုကိုလေးစားရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၏ဆုရရှိသူ NAB Crystal ရေဒီယိုဆု မှာကြေငြာခဲ့သည် ကျွန်ုပ်တို့သည်အသံလွှင့်သူများ၏အခမ်းအနားဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသံလွှင့်သူများ၏အခမ်းအနားဖြစ်သည် ဒေသခံရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားဌာနများ၏ရပ်ရွာထဲတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ and နှင့်သူတို့၏နားထောင်သူများနှင့်ကြည့်ရှုသူများအားဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေမှုများကိုဂုဏ်ပြုသည်။ ဒီအခမ်းအနား၏အဓိကမီးမောင်းထိုးပြခြင်း၏တင်ဆက်မှုများပါဝင်သည် တီဗီဥက္ကChairman္ဌ၏ဆုရုပ်မြင်သံကြား၌ထင်ရှားသောအောင်မြင်မှုများအတွက်ဆုဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသံလွှင့်သူများ၏အခမ်းအနားဖြစ်သည် Crystal ရေဒီယိုဆုပေးပွဲနှင့်အတူတစ်နှစ်ပတ်လုံးလူထုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းအတွက်ကြီးမားသောကတိက ၀ တ်ပြုမှုအတွက်ရေဒီယိုလိုင်း ၁၀ ခုကျော်ကိုလည်းအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ အင်ဂျင်နီယာအောင်မြင်မှုဆု တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအတွက်အသံလွှင့်လုပ်ငန်းတွင်သူတို့၏ထူးခြားသောအောင်မြင်မှုများအတွက်။
အဆိုပါ NAB Crystal Heritage Award လည်းမှာတင်ပြပါလိမ့်မည် ကျွန်ုပ်တို့သည်အသံလွှင့်သူများ၏အခမ်းအနားဖြစ်သည်, သောကာလအတွင်းAprilပြီလ 21, အင်္ဂါနေ့တွင်ကျင်းပလိမ့်မည် 2020 NAB ပြရန် Las Vegas မှာ, နီဗားဒါး။ ၏ရွေးချယ်ရေးဖြစ်စဉ်ကို NAB Crystal ဆုပေးပွဲ ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်လူထုဝန်ဆောင်မှုနောက်ခံရှိသူများသည်နောက်ဆုံးပေါ်အယောက် ၅၀ ကျော်ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်အလုပ်များသည်။ တင်သွင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အွန်လိုင်းမှတင်သောဘူတာများရှိသည် entry ကို, ၎င်းတို့သည် 2019 ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက်လူထုအသိုင်းအဝိုင်း၏အားထုတ်မှု၏အတိုင်းအတာကိုဖော်ပြပေးသည်။
များအတွက်နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲ Crystal ရေဒီယိုဆု NAB show ကို ၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေငြာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်ခွင့်ကိုနောက်ဆုံးရက်ကို ၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီ ၃၁ မှာလက်ခံရမယ် ဒီမှာ သို့မဟုတ် NAB ရုပ်မြင်သံကြား / ရေဒီယိုဆုပေးပွဲမန်နေဂျာနှင့်ဆက်သွယ်ပါ Tobi ခန်းမ.
NAB နှင့် 2020 အကြောင်း NAB ပြရန်
အဆိုပါ လူငယ်ကဏ္ဍအမျိုးသားအစည်းအရုံး အမေရိကရှိရုပ်သံလွှင့်သူများအတွက်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအသင်း၏အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ဤအသင်းအဖွဲ့သည်ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအကျိုးစီးပွားများကိုဥပဒေပြုရေး၊ အသင်းအဖွဲ့များ၏ထောက်ခံအားပေးမှု၊ ပညာရေးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများမှတဆင့်ထုတ်လွှင့်သူများအနေဖြင့် ၄ င်းတို့၏လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခြင်း၊ သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအားကောင်းစေခြင်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်အခွင့်အလမ်းအသစ်များကိုအကောင်းဆုံးစွမ်းရည်များဖြင့်အသုံးချနိုင်ခြင်း၊ တီထွင်မှု၏ရွေးချယ်စရာများကိုကျယ်ပြန့်စေရုံသာမကမြေမျက်နှာသွင်ပြင်ကိုပါကျယ်ပြန့်စေသည့်နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများစွာ
အဆိုပါ 2020 NAB ပြရန် Nevada, Las Vegas မှာAprilပြီ ၁၈-၂၂ မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ် Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာကမ္ဘာပေါ်တွင်တစ်ခုတည်းသောစည်းဝေးကြီးစင်တာတစ်ခုဖြစ်သည့်၎င်းသည်နိုင်ငံပေါင်း ၁၆၀ မှတက်ရောက်သူ ၉၀,၀၀၀ ကျော်နှင့်ပြသထားသော ၁၀၀၀၀ ကျော်နှင့်အတူပရိသတ်များပါ ၀ င်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ 2020 NAB ပြပွဲ ရိုးရာအသံလွှင့်ဌာနကိုကျော်ဖြတ်ပြီးဒစ်ဂျစ်တယ်ဇာတ်လမ်းပြောပြသည့်စီးပွားရေးကိုအားဖြည့်ပေးသည့်ဖြေရှင်းနည်းများအတွက်အမြင့်ဆုံးစျေးကွက်သည်တီထွင်ဆန်းသစ်သောတီထွင်ဖန်တီးမှုများနှင့်သူတို့၏အသံများနှင့်သူတို့အောင်မြင်စွာမြှင့်တင်နိုင်သည့်အမှတ်တံဆိပ်များ၏ပင်ကိုစွမ်းရည်ကိုအပြည့်အဝနားလည်ရန်ရှာဖွေနေသည်။
အဆိုပါ 2020 NAB Show ရဲ့ ပုံစံသည်ဖန်တီးမှုကိုပလက်ဖောင်းများစွာနှင့်မရေမတွက်နိုင်သောလူမျိုးစုများအကြားစားသုံးမှုသို့ပို့ဆောင်သည်။ ဤနှစ်ပတ်လည်ဖြစ်ရပ်သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမြော်အမြင်ရှိသူများသည်အကြောင်းအရာများကိုအသစ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောနည်းများဖြင့်အသက်ဝင်စေရန်နှင့်ဆုကဲ့သို့ဆုများဖြင့်စုဝေးသည့်ပြပွဲတစ်ခုဖြစ်သည် Crystal ရေဒီယိုဆု NAB၎င်းဖြန့်ချိသည့်ဖျော်ဖြေရေးနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုသည်သူတို့နှင့်သူတို့ကြိုးစားရန်ကြိုးပမ်းနေသည့်ရပ်ရွာလူထုများအတွက်ပေးလိမ့်မည်။
ယင်းအပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက Crystal ရေဒီယိုဆု NAB အဖြစ် 2020 NAB ပြပွဲ, ထွက်ခွာသည် www.nabshow.com/.
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ 2020 NAB ပြရန် ဆုချီးမြှင့်ရှိုးပွဲများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ အသိုင်းအဝိုင်းဝန်ဆောင်မှု အင်ဂျင်နီယာအောင်မြင်မှုဆု ဖျော်ဖြေရေး Las Vegas မှ NAB NAB Crystal Heritage Award Crystal ရေဒီယိုဆု NAB လူငယ်ကဏ္ဍအမျိုးသားအစည်းအရုံး podcast Tobi ခန်းမ တီဗီဥက္ကChairman္ဌ၏ဆု ကျွန်ုပ်တို့သည်အသံလွှင့်သူများ၏အခမ်းအနားဖြစ်သည်	2020-01-11
ယခင်: အယ်ဒီတာလက်ထောက်, Post ထုတ်လုပ်မှု
နောက်တစ်ခု: တောင်ကိုရီးယား Testbed အသစ်သည် ATSC 3.0 Service Models ကိုအတည်ပြုရန်ရည်ရွယ်သည်